Tender Announcements of 12th, May, 2022
Tender Announcements of 25th, March, 2022
သစ်ထုတ်ရေးဌာနသည် ရေရှည်တည်တံ့သောသစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းစနစ် ( Sustainable Forest Management - SFM )နှင့် အညီ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ မှတ်ရိုက် ပေးထားသော ကျွန်း၊ သစ်မာ၊ ကျွန်းပယ်သစ်နှင့် အခြားသစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံ-စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်များအား တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေး နေရုံသာမက နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်နေရသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
SOP for Harvesting Operations
Extraction department is one of the major departments of MTE to contribute to the nation’s economic development as well as to fulfill the human needs. All of the extraction procedures must be in accordance with the principles of Sustainable Forest Management (SFM) encompassing the three aspects of environmental, social and economic functions.
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုသက်သာစေသော သစ်ထုတ်ခြင်းနည်းစနစ် ( RIL ) ဆိုသည်မှာ သစ်တောများမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ သစ်တောနှင့် သစ်တော၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကောင်းမွန် တိုးတက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိစေရန်အတွက် သစ်ခုတ်လှဲ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့် အလိုက် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် စနစ်တကျစီမံ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ အောင်မြင်စေရန် တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်နေသော အမာခံ ကျောရိုးဖြစ်သည့် တော၀န်ထမ်းများ၊ ဆင်၀န်ထမ်းများနှင့် ယာဉ်ယန္တရား၀န်ထမ်းများအနေနှင့် သစ်တောဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာပြီး ဌာနမှချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလက်စွဲ၊ အမြဲတမ်းအမိန့်၊ ဌာန ဆိုင်ရာညွှန်ကြားလွှာနှင့် အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်များကို အမြဲသိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားလွှာများ ( Departmental Instructions - DI-122 )
သစ်ထုတ်ရေးဌာနသည် ရေရှည်တည်တံ့သောသစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းစနစ် ( Sustainable Forest Management - SFM )နှင့် အညီ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ မှတ်ရိုက် ပေးထားသော ကျွန်း၊ သစ်မာ၊ ကျွန်းပယ်သစ်နှင့် အခြားသစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံ-စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်များအား တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေးနေရုံသာမက နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်နေရသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။